Qaramada Midoobay oo $3 Milyan dollar oo degdeg ah ku bixineysa xasilinta Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaramada Midoobay oo $3 Milyan dollar oo degdeg ah ku bixineysa xasilinta Soomaaliya
20th March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa soo dhoweeyay dagaalka Alshabaab looga saaray dhowr degmo oo ka tirsan goboollada dalka Soomaaliya ee ay wadaan ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM.
“Waxaan Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ugu hambalyaynayaa gacan ku haynta magaalooyin muhim ah iyo goobo kale ee ay dib uga soo ceshadeen Al-Shabaab” ayuu yiri Nicholas Kay.
“Waxaan ciidamada Soomaaliyeed iyo jaalkooda ee walaalaha Afrikaanka ah ku ammaanayaa sida ay uga go’antahay iyo sida naftooda ay ugu hureen,” ayuu yiri Ergeyga Gaarka ah Kay.
“Qaramada Midoobay waxay sii wadi doontaa taageerada ay hawlgallada midaysan iyadoo la raacayo Qaraarka Golaha Amaanka ee tirsigiisu yahay 2124 iyo siyaasadda taxadirka xuquuqda aadanaha ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay. Waxaa muhim ah in sharciga caalamiga ah ee xilliyada dagaallada iyo xuquuqda aadanaha si buuxda loo dhowro.” ayuu sidoo kale yiri Kay.
Wuxuu sheegay danjire Kay in Qaramada Midoobay Soomaaliya ugu deeqeyso $3 Milyan dollar oo wax looga qabanayo nabad dhisidda dalka, wuxuuna yiri “Qaramada Midoobay waxay taageertaa dadaalladan xasillinta, taasoo ay ka mid tahay in si degdeg ah ay ugu deeqdo $3 million oo doolar oo ka timaada Sanduuqa Nabad-Dhisidda Qaramada Midoobay,”.
Ergayga Qaramada Midoobaya ayaa xusay in dagaaalka socda uu saameeyey dadka rayidka ah, wuxuuna yiri “Dagaalku wuxuu saameeyay dadweynaha rayidka ah. Qaramada Midoobay iyo bulshada caalamkuba waxay billaabeen inay wax ka qabtaan baahida gargaarka baniaadanimo haddii ay suurtogal tahay in la gaaro, baahidana la qiimeeyo”.
“Soomaalida ku nool goobaha ay hadda Dowladdu la taliso waa inay si degdeg ah u helaan waxay u baahanyihiin: sida nabadgelyo iyo caddaalad, adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo nolol wanaagsan”, ayuu sheegay Ergeyga Gaarka ah Kay.
Wuxuu soo dhoweeyay qaybta ay bulshada caalamku ka geysato dadaalka Dowladdu ugu jirto si ay u xaqiijiso in ay Soomaalidu ka fa’iideysato nabadda iyo xasilloonida, wuxuuna ku baaqay taageero caalami ah oo intaa ka badan.
Ciidamada Soomaaliya iyo AMOSOM oo wada howlgal milateri oo ka dhan ah Alshabaab ayaa la wareegay degmooyinka, Xudur, Waajid iyo Rabdhuure oo ka tirsan gobolka Bakool, iyo Buurdhuubo oo ka tirsan Gedo iyo Warsheekh oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe iyo Buulo-barde oo ka tirsan Hiiraan.
Ciidamada badda Taliyaaniga oo badbaadiyey boqolaal Muhaajiriin reer Afrika ah
Ilaria Alpi killed in Somalia while investigating toxic waste